SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Kunyunyuta kwaJeremiya (1-4)
Mhinduro yaJehovha (5-17)
12 Haiwa Jehovha, imi makarurama+ pandinonyunyuta kwamuri,Pandinotaura nemi nezvenyaya yekutonga zvakarurama. Asi nei nzira yevakaipa ichibudirira,+Uye nei vaya vanonyengera vasina zvinovanetsa mumwoyo? 2 Makavadyara uye vadzika midzi. Vakura uye vabereka michero. Hamubvi pamiromo yavo, asi pfungwa dzavo dzakadzama* dziri kure nemi.+ 3 Asi imi munonyatsondiziva, haiwa Jehovha,+ munondiona;Makaongorora mwoyo wangu mukaona kuti unoita zvamunoda.+ Vasarudzei semakwai ekuuraya,Uye vatsaurei kuitira zuva rekuurayiwa. 4 Nyika icharamba ichioma kusvikira riiniUye zvinomera zvemasango ese zvicharamba zvichioma kusvikira riini?+ Zvakaipa zvevaya vari kugara mairiZvaita kuti mhuka neshiri zviparadzwe. Nekuti vakati: “Haasi kuona zvichaitika kwatiri.” 5 Kana uchineta nekumhanya nevetsoka,Ungakwikwidzana sei nemabhiza?+ Uri kunzwa wakagadzikana munyika yerugare,Asi uchaita sei pakati pemazibvokocho esango ari pedyo naJodhani? 6 Nekuti kunyange hama dzako chaidzo, iyo imba yababa vako,Dzakakunyengera.+ Vakashevedzera nenzwi riri pamusoro kwauri. Usatenda mavariKunyange kana vakataura zvinhu zvakanaka kwauri. 7 “Ndasiya imba yangu;+ ndabva panhaka yangu.+ Ndaisa mudiwa wangu wepamwoyo* mumaoko evavengi vake.+ 8 Kwandiri nhaka yangu yava seshumba iri musango. Yandidzvovera. Saka ndava kuivenga. 9 Kwandiri nhaka yangu yakaita seshiri ine mavara inodya nyama;Dzimwe shiri dzinodya nyama dzinoimomotera dzoirwisa.+ Uyai, unganai, imi zvikara zvese zvesango,Uyai mudye.+ 10 Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemizambiringa;+Vakatsika-tsika nyika yangu.+ Vakasiya nyika yangu yakanaka yava renje risina chinhu. 11 Yava nyika isina chinhu. Yaoma;*Yava dongo pamberi pangu.+ Nyika yese yaitwa dongo,Asi hapana ane basa nazvo.+ 12 Vaparadzi vauya nemumakwara ese akapfumbira anopfuura nemurenje,Nekuti bakatwa raJehovha riri kuparadza kubvira kumugumo wenyika kusvika kune mumwe mugumo wayo.+ Hapana ane* rugare. 13 Vakadyara gorosi asi vakakohwa minzwa.+ Vakashanda zvakaoma asi hapana chakabuda. Vachanyara nezvavachakohwaNemhaka yekutsamwa kukuru kwaJehovha.” 14 Zvanzi naJehovha kuvavakidzani vangu vese vakaipa vari kubata nhaka yandakapa vanhu vangu vaIsraeri:+ “Ndiri kuvadzura panyika yavo,+ uye ndichadzura imba yaJudha pakati pavo. 15 Asi kana ndavadzura, ndichavanzwirazve tsitsi, ndodzosa mumwe nemumwe wavo kunhaka yake nekunyika yake.” 16 “Uye kana vakava nechokwadi chekuti vadzidza nzira dzevanhu vangu uye kupika nezita rangu vachiti, ‘NaJehovha mupenyu!’ sekudzidzisa kwavakaita vanhu vangu kupika naBhaari, vachagara nevanhu vangu. 17 Asi kana vakaramba kuteerera, ndichadzurawo rudzi irworwo, ndicharudzura nekuruparadza,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.+
^ ChiHeb., “itsvo dzavo.”
^ Kana kuti “anodiwa nemweya wangu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Iri kuchema.”
^ ChiHeb., “nyama ine.”